Bucket Tooth & Adapter ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Bucket သွားနှင့် Adapter စက်ရုံ
ရောင်းချ 6Y6335 သွားအံသွားများပုံး adapter တူးဖော်ရေပုံးအံသွားသွားအမှတ် ripper
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းအနိမ့်သံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သတ္တုများသွန်းလောင်းခြင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများ 9W8452 1U3352-8 1U3302-4 PC400 3. ကောင်းကျိုးများ / ထူးခြားချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ် ISO9001-2000 ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ, manufacturin ချမှတ်
ရောင်းချ PC200 တူးဖော်ပုံးဖနောင့်ဖိနပ်ထောင့်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ခလုတ်ဒိုးနက် chocky wear ဘားအစိတ်အပိုင်း no.CB 25 အရွယ်အစား: 240x25x23mm
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်အားသာချက်များ / အင်္ဂါရပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ် ISO9001-2000 ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားသက်ရောက်မှုနှင့်မာကျောမှုရှိစေရန်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ၊ ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်တိကျစွာပုံသွင်းခြင်းနည်းပညာကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (%): ကာဗွန် - 0.26-0.28 Silicon - 0.4 Manganese - 0.8 Copper - --0.02 Ti - .10.1 SP - ...
20GPE / 30GPE / 40GPE / 55GPE / 65GPE / 80GPE အတွက် Volvo ပုံးအံသွား
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်နိမ့်သောသံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံပုံများ သင်ရည်ညွှန်းသည်အတိုင်းအောက်ပါသွားများအတွက်ပုံးသွားပုံစံအတွက် ပို၍ နမူနာဖြစ်သည် - 1U3202WT Caterpillar 1.40 J200 1U3202T Caterpillar 1.20 J200 1U3202 Caterpillar 1.40 J200 1U3201 Caterpill ...
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းအနိမ့်သံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများသွားများပုံသဏ္Surာန်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်များ Pics အားသာချက်များ / အင်္ဂါရပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ် ISO9001-2000 ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ, ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ် ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Normal Temp: 900 / C ဆန့်နိုင်စွမ်း: 1150MPA သက်ရောက်မှု (Akv): 16J-18J ကြာရှည်: 6% မာကြော: 47-52HRC ပုံးအံသွားကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းအနိမ့်အလွိုင်းသံမဏိများအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်ပုံသဏ္Forာန်သံမဏိမျက်နှာပြင်ခိုင်မာမှု 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုခြင်း ISO9001 -9002 FOB စျေးနှုန်း FOB Xiamen USD ၅-၅၀ / MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Pics ၏အားသာချက်များ / အင်္ဂါရပ်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ...
သတ္တုများသွန်းလောင်းခြင်း jcb ပုံးအံသွားဆောက်လုပ်ရေးကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းအနိမ့်သံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းပုံသဏ္Forာန်ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာမှု 470-540mm HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများ အားသာချက်များ / လက္ခဏာများ: ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (%): ကာဗွန် - 0.26-0.28 Silicon - 0.4 Manganese - 0.8 Copper ...
တူးဖော် adapter 207-939-3120
အသေးစိတ်ပုံရိပ်များကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်အနိမ့်အလွိုင်းစတီးဖြင့်အရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်ပုံသွန်းခြင်းသံမဏိပြားပုံသဏ္castာန်ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 10-50 / Piece MOQ 20 အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ဦး စီးဌာနသည်ဂျာမနီမှတင်သွင်းသည့် spectorometer၊ Optical metallographic microscope, H ...
သွား 141-78-11253 အံသွား 234-785-1121 ripper အကြံပေးချက်များ
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်နိမ့်သောသံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သွန်းလောင်းခြင်းပုံသဏ္Hardာန်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ၁၅-၂၀ ရက်အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများ ကောင်းကျိုးများ / ထူးခြားချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ် ISO9001-2000 ကိုကျော်လွန်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကြိုတင်၏နည်းပညာကိုလက်ခံ
အလွိုင်းသံမဏိပစ္စည်းများ PC400 တူးဖော်သောပုံးများသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော 2057019570
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းအနိမ့်သံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သွန်းလောင်းခြင်းပုံသဏ္Surာန်မျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်း 2. ဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Pics Forgin သွားအပိုင်း no.as သည်သင်၏ရည်ညွှန်းချက်အတွက်လိုက်နာသည်။ 1U-3201 အတို 6Y-6221 တိုတို 1U-3251 တိုတို 1U-3301 Short 1U-3351 အတို 168-1351 Short 7T-3401 Short 9W-8451 / ...
၁၁၉-၃၂၀၄ နှင့် Rock Chisel သွားပွိုင့်အတွက်သင့်တော်သော Mini Excavator Bucket Teeth
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်နိမ့်သောသံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းပုံသဏ္47ာန်ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများအားသာချက်များ / ထူးခြားချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO9001-2000 အားနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကြိုတင်၏နည်းပညာကိုလက်ခံ
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်နိမ့်သောသံမဏိအရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းပုံသဏ္47ာန်ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း 47-52HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD 5-50 / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရက် ၃၀ အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများအားသာချက်များ / ထူးခြားချက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ISO9001-2000 အားနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ နှင့်အဆင့်မြင့်စာမေးပွဲ, ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် preci ၏နည်းပညာကိုလက်ခံသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်ပစ္စည်းသံမဏိသတ္တုစပ်သတ္တုစပ်အရောင်များအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နည်းစနစ်သတ္တုသွန်းခြင်းသံမဏိသွန်းလောင်းခြင်းမျက်နှာပြင်ခိုင်မာခြင်း ၄၇၀-၅၂၀mm HRC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001-9002 FOB စျေး FOB Xiamen USD ၅-၅၀ / Piece MOQ ၂ အပိုင်းအစစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက် ၁၅-၂၀ ရက်အတွင်းဒီဇိုင်း / ဖွဲ့စည်းပုံ / အသေးစိတ်ပုံများသင့်၏ရည်ညွှန်းကိုးကားရန်အတွက်အောက်ပါအတိုင်းပုံးသွားပုံစံအတွက်နောက်ထပ်မော်ဒယ်များရှိသည်။ FH205-70-5120 (5cm) 12.8 PC300 FH205-70-5120 (5.5cm) 12.8 PC300 207-939-5120 (3.5) 10.2 ...